Manchester United oo weli xiiso u qabta Weeraryanka Juventus ee Paulo Dybala & Tartan adag oo ay kala kulmayso Kooxda… – Gool FM
Manchester United oo weli xiiso u qabta Weeraryanka Juventus ee Paulo Dybala & Tartan adag oo ay kala kulmayso Kooxda…
(Manchester) 07 Feb 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la soo warinayaa inay weli xiisaynayso saxiixa Weeraryahanka Naadiga Juventus ee Paulo Dybala, waxaana suuro-gal ah inay u dhaqaaqdo suuqa xagaaga ee soo aaddan.
Dybala ayaa la la xiriirinayey kooxo waa weyn oo ka mid yihiin ku ka dhisan qaaradda Yurub suuqyadii kala iibsiga ee la soo dhaafay, waxaana kooxahaas ka mid ah Real Madrid iyo Manchester City.
Real Madrid ayaa la filayaa inay kordhiso xiisaha ay u qabto xiddigan suuqa xagaaga ee soo aaddan, laakiin warsidaha Corriere dello Sport ayaa soo jeedinaya in Manchester United ay kula xafiiltami doonto kooxda difaacanaysa Champions League saxiixiisa haddii ay noqoto inuu caddeeyo in la heli karo.
Midkoodka Dybala ama Juventus kama hadlin haddii xiddiga xulka qaranka Argentine uu ka tagayo kooxda dhammaadka xilli ciyaareedkan, laakiin Man United ayaa dooneysa inay u dhaqaaqdo saxiixiisa haddii ay suuro-gal tahay inuu rabo inuu dhaqaaqo.
Juve ayaa sidoo kale xiisaynaysa dhowr ciyaaryahan oo weerarka ka ciyaara oo ay ku jiraan xiddiga Real Madrid ee James Rodriguez oo haatan amaah ugu ciyaara Bayern Munich, waxaana laga yaabaa inay diyaar u noqoto inuu Dybala ku baxdo lacag dhan 88 milyan oo gini haddii ay awoodaan inay keenaan bedelkiisa.
Dybala ayaa dhaliyey kaliya labo gool 19 kulan oo uu xilli ciyaareedkan ciyaaray horyaalka Serie A, laakiin waxa uu haystaa shan gool shantii kulan ee uu ciyaaray tartanka Champions League.
Real Madrid oo kalsooni ku qabta saxiixa Eden Hazard & Qiimaha ay ku soo qaadanayso oo daaha laga rogay
Marcus Rashford oo doonayey inuu ka tago Manchester United & Kooxda uu ku biiri lahaa oo la ogaaday